Shiinaha daabacaadda shaashadda caadada ah ee caadiga ah ma jiro nin jilicsan oo jilicsan oo wareegsan qoorta heather midab saddex-isku-dhaf ah funaanad shaati iyo soosaarayaal | Himilada
caadadii daabacaadda shaashadda caadigaa ma jiro niman jilicsan oo aasaasi ah qoorta qoorta heather midab saddex-isku-dhaf ah funaanad t
Waa maxay sababta funaanadda saddexda ah ee quruxda badani u kulul tahay? Markuu macmiilkaygu raadsado talo ku saabsan xulashada shay uu sameeyo shaadh caadi ah, waan hubaa inaan ku taliyo. Haddii aad i weydiin lahayd sababta, waxaan kuu sheegi lahaa in shayga 'triblend tee' uu yahay waxa ugu jilicsan ee aad waligaa taaban doonto.
1.Waa maxay sababta shaarka saddexda ah ee quruxda badani u kulul yahay? Markuu macmiilkaygu raadsado talo ku saabsan xulashada shay uu sameeyo shaadh caadi ah, waan hubaa inaan ku taliyo. Haddii aad i weydiin lahayd sababta, waxaan kuu sheegi lahaa in shayga 'triblend tee' uu yahay waxa ugu jilicsan ee aad waligaa taaban doonto.
T-shaati-yada-isku-dhafka ah ee saddexda ah waa caag, suuf, iyo isku-darka rayon. Labadooduba waa kuwo aad u jilicsan oo aad u fudud, waxay ku imaanayaan kaliya 140gsm qaro weyn, muuqaal aad u qurux badan oo heer sare ah. Dharka isku dhafan waxay isku daraan cimri dherer leh jilicsanaan jilicsan oo jilicsan. Polyester wuxuu hayaa qaabka iyo dabacsanaanta; Suufku wuxuu ammaahiyaa raaxo iyo adkeysi labadaba; Rayon wuxuu sameeyaa muuqaal gaar ah; Natiijooyinka daabacaadda shaashadda sare; Ka dhumuc yar tii hore
Xiga: caag daabac caado caag ah oo shaqeynaya astaan ​​shaati
Shirt Factory Shiinaha